Man City Oo Warqad Rasmi Ah U Qortay Madaxa Garsoorka Premier League Ee Mike Riley Iyo Shir Laga Yeelanayo VAR. - Gool24.Net
Maamulka kooxda Manchester City ayaa ku biiray liiska kooxo warqado cabasho ah u gudbiyay gudoomaiyaha garsoorka Premier League ee Mike Riley kadib cadhadii ay maamulka Etihad Stadium ka qaadeen guuldaradii Liverpool.
Manchester City ayaa warqad u qortay gudoomiyaha garsoorka Premier league ee Mike Riley ka hor kulanka barri uu la yeelan doono madaxda kooxaha horyaalka Ingiriiska oo uu kala tashan doono in isbadal lagu sameeyo qaabka VAR loo adeegsado.
Mike Riley ayaa ka hor kulanka barri waxa uu cadaadis ku saaran yahay in horumar wayn lagu sameeyo adeegsiga aalada casriga ah ee VAR oo muran badan abuurtay todobaadyadii ugu danbeeyay ee Premier league.
Manchester City ayaan ahayn kooxdii ugu horaysay ee warqad cabasho cadho leh u qortay Mike Riley balse waxaa ka horeeyay kooxo ay ka mid yihiin Brighton iyo Aston Villa oo cadho wayn ka qaaday go’aano VAR uu sixi waayay.
Wargayska The Times ayaa shaaciyay in kooxo dhawr ah oo ay Manchester City ugu danbaysay ay warqado rasmi ah u qoreen madaxda garsoorka Premier League ee Mike Riley si ay ugu muujaan cadhada ay ka qabaan VAR.
Sida warka The Times lagu cadeeyay, todobaadkan waxay Manchester City xidhiidh la samaysay Mike Riley oo uu Pep Guardiola magiciisa ku soo qaaday shirkii jaraa’id ee ka danbeeyay kulankii Anfield markaas oo uu codsaday in go’aanadii kooxdiisu diiday la waydiiyo Mike Riley.
Mike Riley ayaa barri la shiri doona maamulada kooxaha Premier League waxaana la filayaa in wax badan looga hadli doono qaabka ay garsoorka Premier League u adeegsadaan VAR kaas oo eedayn badan la soo kulmayay.
Muddadii saddexda bilod iyo badhka ahayd ee Premier League laga soo adeegsanayay VAR waxaa ka dhacay go’aano badan oo muran dhaliyay iyada oo waliba ay xaalada ay uga sii dareen sharciyo isbadal lagu sameeyay horaantii xili ciyaareedkan.
Manchester City ayaa cadho wayn ka muujisay in aan kooxdeeda rekoodhe lagu abaal marin markii uu Arnold kubbad cagta ku taabtay inkasta oo maamulka Premier League ay sharaxaad ka bixiyeen sababta aan arintan rekoodhe looga dhigin.
Si kastaba ha ahaatee, madaxa garsoorka Premier League ee Mike Riley ayaa cadaadis badan la soo kulmayay xiliyadii la soo dhaafay iyada oo dhawr kooxood ay warqado rasmi ah u soo qoreen markii ay ka biyo diideen VAR iyo qaabka garsoorku go’aano ugu qaateen.